पाल्पाको तिनाउमा एमालेका प्रेम श्रेष्ठले फहराए विजयकाे झण्डा, कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन ‘पत्तासाफ’
May 15, 2022 N88LeaveaComment on पाल्पाको तिनाउमा एमालेका प्रेम श्रेष्ठले फहराए विजयकाे झण्डा, कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन ‘पत्तासाफ’
तानसेन । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई पराजित गर्दै एमालेका प्रेम श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। उनले ५०९० मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका राजेश श्रेष्ठले ४४६६ मत ल्याए। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि एमाले उम्मेदवार औम बहादुर घर्ती मगर विजयी भएका थिए। उपाध्यक्षमा भने कांग्रेसका लालबहादुर थापा विजयी भए। उनले ५०८२ मत ल्याए।लालबहादुरले एमालेका […]
भरतपुरमा रातभरमा भयाे उलटपुलट, एमालेका विजयकाे अग्रता (बिहानकाे ताजा अपडेट)
May 15, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा रातभरमा भयाे उलटपुलट, एमालेका विजयकाे अग्रता (बिहानकाे ताजा अपडेट)
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा आठ हजार ८६३ मतको गणना सकिएको छ । अहिले वडा नम्बर ३ को मतगणना भइरहेको छ । रेनु दाहालले तीन हजार १४७ मत ल्याउँदा एमालेका सुवेदीले तीन हजार १५३ मत प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्र उमेदवार जगन्नाथ पाैडेलले एक हजार ९३ मत पाएका छन् । उपमेयरमा सत्ता गठबन्धनका उमेदवारले तीन हजार […]
मध्यरातमा भरतपुरबाट आयो यस्तो विवरण (मतसहित)
May 15, 2022 N88LeaveaComment on मध्यरातमा भरतपुरबाट आयो यस्तो विवरण (मतसहित)
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा ८०८५ मतपत्र गणना सकिएको छ । गठबन्धनबाट मेयरमा उम्मेदवार रहेकी माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल २९१८ मत ल्याएर अर्का उम्मेदवार एमालेका विजय सुवेदी भन्दा ३ मतले पुनः अग्रता लिएकी छन् । सुवेदीले २९१५ मत पाएका छन् । यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले ९२४ मत पाएका छन् । यस्तै उपमेयरमा गठबन्धनबाट काँग्रेसका चित्रसेन […]
कति छ बालेन र स्थापितकाे मतान्तर ?
May 15, 2022 N88LeaveaComment on कति छ बालेन र स्थापितकाे मतान्तर ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँगको अग्रता बढाइरहेका छन्। आइतबार राति १० बजेसम्म उनले ४३६५ मत पाइसकेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले २३०३ मत पाएका छन्। बालेनले उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पूर्व नगर प्रमुख समेत रहेका स्थापितभन्दा २०६२ मत धेरै ल्याएका छन्। यस्तै तेस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना […]
काठमाडाैं महानगरमा एमालेकाे विजयी सुरूवात !
May 15, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैं महानगरमा एमालेकाे विजयी सुरूवात !
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा नेकपा (एमाले)ले वडाध्यक्ष जितेको छ । मतगणनाको अन्तिम परिणामअनुसार एमालेका भरतलाल श्रेष्ठ ६२२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका किरण श्रेष्ठले ५९८ मत प्राप्त गरेका छन् । भरतलाल यसअघि पनि सोही वडाको अध्यक्ष थिए । वडाध्यक्ष विजयी भए पनि एमालेकै मेयर उम्मेदवार केशव […]
भरतपुर अपडेट : एमालेका विजय सुबेदीले बढाए थप मतान्तर, रेणुकाे रफ्तारमा लाग्याे ब्रेक
May 15, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर अपडेट : एमालेका विजय सुबेदीले बढाए थप मतान्तर, रेणुकाे रफ्तारमा लाग्याे ब्रेक
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले अग्रता लिएका छन् । आइतबार राति सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार सुवेदीले २५४९ मत पाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले २५३० मत पाएकी छन् । आइतबार दिउँसोसम्म रेनु झिनो मतले अगाडि थिइन्, तर सुवेदीले मतान्तर घटाउँदै लगे र साँझ अग्रता कायम गरेका छन् । […]
काठमाडाैं महानगरमा बालेनले ह्वात्तै बढाए अग्रता, यस्ताे छ नयाँ अवस्था (ताजा अपडेट)
May 15, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैं महानगरमा बालेनले ह्वात्तै बढाए अग्रता, यस्ताे छ नयाँ अवस्था (ताजा अपडेट)
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँग मतान्तर बढाइरहेका छन्। पछिल्लो मतगणना अनुसार शाहले ४१३९ मत प्राप्त गरेका छन्। बालेनलाई नेकपा एमालेका केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन्। स्थापितले २१४८ मत ल्याएर पछ्याइरहेका हुन्। गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसकी उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंहले १९३४ मत पाएकी छन्। अहिले काठमाडौंको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ३२ […]
भरतपुरमा रेनु पछाडि परिन्, एमालेका सुवेदीकाे अग्रता (कसकाे कति मत)
May 15, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा रेनु पछाडि परिन्, एमालेका सुवेदीकाे अग्रता (कसकाे कति मत)
चितवन । भरतपुरमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाललाई एमालेका विजय सुवेदीले उछिनेका छन्। गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले २४६५ मत ल्याएकी छन् भने एमालेका विजय सुवेदीले २४६८ मत ल्याएका छन्। रेनुलाई ३ मतले उछिन्दै विजय अघि बढेका छन्। यस्तै जगन्नाथ पौडेलले ८०५ मत ल्याएका छन्। उपमेयरमा गठबन्धनबाट चित्रसेन अधिकारीले २७०१ मत ल्याएका छन्। राप्रपाबाट हिमला गुरुङले […]
भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीकाे छलाङ, एकाएक खुम्चिइन् रेनु दाहाल !
May 15, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीकाे छलाङ, एकाएक खुम्चिइन् रेनु दाहाल !
काठमाडाैं । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा दुई मतको मात्रै अन्तर रहेको छ। आइतबार साँझ ७ बजेसम्मको मतगणनामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उम्मेदवार रेणु दाहालले दुई हजार ४२५ मत पाएकी छन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का विजय सुवेदीले दुई हजार ४२३ मत पाएका छन्। एमाले उम्मेदवार सुवेदीले मतान्तर घटाउँदै लगएका छन्। त्यस्तै, तेस्रो नम्बरमा रहेका स्वतन्त उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको […]
काठमाडाैंमा नयाँ वडामा पनि बालेनलाई बढी मत, यस्ताे छ ताजा अपडेट
May 15, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैंमा नयाँ वडामा पनि बालेनलाई बढी मत, यस्ताे छ ताजा अपडेट
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँग मतान्तर झनै बढाएका छन्। पछिल्लो मतगणना अनुसार शाहले ३५३२ मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन्। स्थापितले १८५६ मत ल्याएर पछ्याइरहेका हुन्। गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसकी उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंहले १६६८ मत पाएकी छन्। अहिले काठमाडौंको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ३२ […]